ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ ၁၃ - MoeMaKa Media
Home / Junior Win / Literature / Technology / Thoughts / ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ ၁၃
ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ ၁၃
Junior Win, Literature, Technology, Thoughts
အတွေးအမြင် ၃၃၄ သြဂုတ် ၂၀၂၀
(2001 ခုနှစ်ထုတ် M. Mitchell Waldrop (အမ် မီချယ် ဝါလ့်ဒရော့) ရေးသားသော The Dream Machine ကို ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ J.C.R. Licklider နဲ့ သူ့ရဲ့ ပါစင်နယ်ကွန်ပြူတာ နည်းပညာတော်လှန်ရေး အကြောင်း ဆိုပါတော့ လို့စာအုပ်မှာ ကြော်ငြာထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို စတင်ဘာသာပြန်စဉ်က “အိပ်မက်ထဲက စက်ပစ္စည်း“ လို့ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ သူ့စာအုပ်ထဲက ခေါင်းစဉ်တွေအတိုင်း ဆက်ဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်အကြောင်းဟာ ခေါင်းစဉ်အမျိူးမျိူးနဲ့ သွားနေခဲ့တယ်ပေါ့။ စာအုပ်ထဲက ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ တော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ အဲသည်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ ဆက်ရေးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါမှလည်း အခုဆောင်းပါးများဟာ ကွန်ပြူတာဆိုတဲ့ နည်းပညာတော်လှန်ရေး အကြောင်း ပိုပီး လူတွေ သတိထားမိလာမယ် လို့ယူဆမိပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ကွန်ပြူတာ ဆိုတဲ့ဝေါဟာရတစ်ခု အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ဆီတိုင်းဟာ သူ့အရည်အချင်းနဲ့သူ ပီပြင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့က ဆောင်းပါးများ မသိမမှီလိုက်သောလည်း ဆောင်းပါးတစ်ခုချင်းဆီဟာ သူတို့တွေအကြောင်း သိသာထင်ရှားနေတာကြောင့် ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို စာဖတ်သူများကို မိတ်ဆက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူရဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်တွေကို ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ )
(အရင်တလက Dream Machine (အိပ်မက်ထဲက စက်ပစ္စည်း) စာအုပ်မှ The Last Transition (နောက်ဆုံး အပြာင်းအလဲ) ဆိုတဲ့ အပိုင်း အဆုံးသတ်ဖော်ပြ ခဲ့ပီး ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၅၀ဝ (ငါးရာ) နီးပါ းရှိတဲ့ အဲသည်စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၇၀နီးပါး (ခုနှစ်ဆယ်) အခန်း ၃ ခန်း ကို ဘာသာပြန်တင်ဆက်ခဲ့ပီးပါပီ။ အခု သည်လက နေစပီး ဆက်လက်၍ New Kinds of People ကိုဆက်သွားပါ့မယ်။ လူသစ်တွေ အကြောင်းလို့ ဆိုမလား ဒါမှမဟုတ် နောက် ထပ်တွေ့လာရဦးမယ် လူထူးလူဆနး်တွေ အကြောင်းပြောမလား။ ပုံစံသစ်နဲ့လူတွေ အကြောင်းဆိုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ )
(အခုဒီအပိုင်းမှာ “အိပ်မက်ထဲက စက်ပစ္စည်း“ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စတင်ရေးသားခဲ့စဉ်တုန်းက ဇာတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ J.C.R. Licklider (ဂျေစီအာရ် လစ်ကလီဒါ) အကြောင်း ပြန်ပါလာပါတယ်။ သူ့အကြောင်း အသေးစိတ် ပြန်ဖတ်ချင်ရင် “အိပ်မက်ထဲက စက်ပစ္စည်း“ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ကို ပြန်ရှာဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။)
Logic (လောဂျစ် - ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်သုံးသပ်မူ) ၊ တွက်ချက်မူ၊ အဆင့်မြင့် လ ျှပ်စီး ပတ်လမ်းများ၊ ၊ ပရိုဂရမ်များ သိမ်းဆည်းမူ၊ ကွန်ယက်များ ချိတ်ဆက်မူ စတာ တွေ က အရှေ့က ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ရှာဖွေ လုံးပန်းခဲ့ကြတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်လုံးပေါ် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်မူများကို လစ်ကလီဒါက ဝါးမြို စားသုံးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီလောက်ကတော့ အသာလေး ဆိုတဲ့သဘော။ အားပါးတရ ကို မိန်ရည်ယှက်ရည်ပါတဲ့။ သူက ရှေ့က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လေ့လာ ခဲ့တာတွေကို သိပ်ကို နှစ်သက် စွာ ဆက်လက် လိုက်စားတဲ့သဘော။
စစ်ပီးခေတ်နှစ်တွေမှာ Nobert Weiiner (နော်ဘတ်ဝီနာ) ရဲ့အင်္ဂါနေ့ ည ညနေစာ သင်တန်းလေးကတော့ သူ့(လစ်) အတွက် အကောင်းဆုံး မှတ်ကျောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ လစ် နဲ့ Psycho- Acoustics Lab (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ- အသံလှိူင်း ဓတ်ခွဲခန်း) က လက်ကျန် အဖော်တွေနဲ့လျောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းတွေကို အသာထားပစ်လို့ အခုတော့ဖြင့် သည်စကားဝိုင်းဘက်ကို လှည့်လာကြတယ်။ တစားပွဲနဲ့တစားပွဲ ကူးခါသန်းခါနဲ့ စိတ်ကူးအကြ့ညဏ်တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖလှယ်နေလိုက်ကြတာ Cambridge ကမ်းဘရစ် တစ်ခုလုံး ညံသွားပါတော့တယ်။ အယောက် လေးဆယ် ငါးဆယ်လောက်က သူတို့ခေတ်တွေတုန်းက အဖြစ်တွေကို ပြန်ပြောင်း အချင်းချင်း ပြောကြဆိုကြ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သူတို့ အိမ်အပြန် Harverd ဟားဗက်ကို သွားမယ့် ကားပေါ်မှာလည်း မပြီးသေးတဲ့ အရေးတကြီးအချက်အလက်တွေ ကို ဆွေးနွေးကြ မပြီးနိုင်ကြသေးပါဘူး။ အိမ်ကို နောက်ဆုံးပြန်ရောက်တော့ လစ် က အဲသည် အတွေးတွေနဲ့မျော ,ယစ်မူး နေတုန်းပါတဲ့။ သူ့ရဲ့အပြာရောင် မျက်လုံးတွေဟာ အသိပညာ ညဏ်ပညာဆိုတဲ့ အလင်းရောင်တွေနဲ့တလက်လက် တောက်ပ နေတယ်။
ပြောရရင် အားလုံးအဲသည်လို ယစ်မူးနေကြတယ်ပေါ့။ အထူးသဖြင့် စစ်ကြီးပီးသွားတဲ့နောက် အကောင်းမြင်သမားတွေ များလာတာကြောင့်ရော သည် နည်းပညာကို မျော်လင့်ချက်တွေ ထားမိလာကြတယ်ဆိုရမှာပါ။ “ကင်းဘရစ်က တကယ့်ကို ပရွက်ဆိတ်အုံ ကြီးဖြစ်နေတယ်“ လို့ ပြောစမှတ်တွင်ရမယ်။ Louise လူးဝစ် လစ်ကလီဒါ (သူမက လစ်ရဲ့ ဇနီး) က အခုလို ပြောပါတယ် - “လူတိုင်း လူတိုင်းက လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်။ မတူညီတဲ့ စိန်ခေါ်မူတွေ ကို ရှာဖွေကြတယ်။ မတူညီတဲ့ အကြံညဏ်တွေကို ထုတ်ကြတယ်။ ကျွန်မက သည်လို ခေါင်းစဉ်တပ်မယ် ”အသိညဏ် မြေသြဇာကြွေးကြခြင်း“ ဟုတ်တယ် တကယ့်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကို ယစ်မူးနေကြ ထုတ်လုပ်နေကြ ငြင်းခုန်နေလိုက်ကြတလေ။ ပြီးတော့ လူမူဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်လည်း တော်တော်လေး ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။“
လစ်ကလီဒါလည်း အဲသည်အုပ်စုထဲ ပါတာပေါ့။ သူက ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲသည် မက်ဆက်ချူးဆက် အရပ်သားလေးက Harvest Square ဟားဗက် စကွဲယား (Cambridge အရပ်ဒေသတစ်ခု ဆိုပါတော့) အနီးက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အထပ်ငယ်လေးမှာ စိတ်ပညာ-အသံလှိူင်း ဓါတ်ခွဲခန်း လူငယ်အုပ်စုလေးတွေနဲ့ အတူ ကျက်စားရာ ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ဇနီးသည် လူးဝစ်က တကယ့်ကို ထူးခြားတဲ့အမျိူးသမီးလေးပါ လို့ William Mc-Gile ဝီလီယမ် မက်ဂျီ ကပြောပါတယ်။ “လူးဝစ်က အနုပညာသမား ကဗျာဆန်တာ မွေးရာပါပဲ။ လစ်က လည်း မွေးရာပါ ညဏ်ကြီးရှင်။ သူတို့၂ယောက်က လက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲပါပဲ။“ မက်ဂျီက အတိတ်ကို ပြန်လှန်ပြပါတယ်။ သူတို့လင်မယား လစ်တို့အိမ်ကို ပါတီ ဖိတ်ထားလို့ တညနေ အလယ်ရောက်တုန်းကတဲ့။ လစ်ကလီဒါတို့ တံခါးကို ခေါက်တော့ လစ်တို့လင်မယားက တံခါးဖွင့်ကြိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထဲမှာ ကော့တေး ထည့်တဲ့ ဂျိူင့်ကိုယ်စီနဲ့တဲ့။ “လူးဝစ်ကလည်းကြိုက်၊ ကျွန်တော်ကလည်းကြိုက်“ လို့ပြောတယ်။ အီတလီလုပ် ကော့တေးကို ငဲ့ပေးပါတယ်။ ပါတီကလူတွေ အားလုံး ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက ်နစ်မျော်ပီး ခေါင်းရှင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့ လို့ မက်ဂျီက ရယ်ပီး ပြောပြတယ်။ နောက်မှ ဆွေးနွေးကျ ညင်းခုန်ကြတယ်ပေါ့။
George Miller ဂျော့မစ်လာကလည်း အခုလို ထောက်ခံပါတယ်။ “လစ်ကို ထောင့်တစ်ထောင့်မှာ Fourier Series ဖိုရီယာစီးရီး(သင်္ချာ သမားတွေသိပါတယ်။ အဲသည်စီးရီး။) နဲ့ ပတ်သက်ပီး သူ့ပါတီကျင်းပနေတုန်း အဲဒါကို အသေအကြေ အညင်းအခုန်လုပ်နေတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ “ ဟုတ်တယ် သူက လစ်က အဲသလိုကောင်မျူးိ။ သူက မျက်နာတည်တည် နဲ့ကိုမနေနိ်ုင်တဲ့လူစား။ ဟားဗက်မှာ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေ ဗုဒဟူးည တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာ လစ်တစ်ယောက် စိတ်ပညာဘာသာရပ်အကြောင်း ရယ်မောပြောဆိုနေလိုက်တာကို မစ်လာက တွေ့ဖူးပါတယ်။ “ကျွန်တော်သူ့ကို ကြည့်ပီး စဉ်းစားမိတယ် ။ ဒီလူက အရာရာကို လေးလေးနက်နက်ရော သဘောထားရဲ့လားလို့။“
လစ်ရေးတဲ့ “ကြိုးမဲ့ လိုင်းမဲ့ သုံး လ ျှပ်စစ်စီးတန်းဖြင့် ကြွက်များကို ရှော့ရိုက်ခြင်း“ ဆိုတဲ့ စာတမ်းတစ်စောင်ဟာလည်း တော်တော်လေး ပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉ ၄၇ ခုနှစ်အလွန်ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတု ကာလမှာ သူတို့လင်မယားမှာ ထရေစီ ဆိုတဲ့သားကလေး တစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ ရာသီဥတုပူလွန်းလို့ သူတို့က Memorial Hall ခေါ်တဲ့ ခန်းမ အဲသည် အခန်းမှာ လေအေးစက်ရှိတယ်။ အဲဒီ ခန်းမတစ်ခုမှာ တညနေသွားနေကြတယ်။ တညတော့ လစ်က အခုလို ရုတ်တရက်ထ ပြောတယ်။ “ငါတု့ ိစမ်းသပ်မူ တစ်ခုလုပ်ကြရအောင်“ သူတို့၂ယောက် ပြွန်ချောင်းတွေကို ပြဉ်ချပ်တွေနဲ့ ပတ်ပီး ဝါယာကြိူးတွေနဲ့ချီကာ လမ်းကြောင်းတွေ ထွင်ကြတယ်။ အဲဒီ ရလဒ်က ၁၉ ၅၀ခုနှစ်မှာ “ကြွက်တွေ၏ နေပုံထိုင်ပုံဆိုင်ရာ ကို လေ့လာခြင်း“ ဆိုတဲ့ စာတမ်း ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အမှန်တော့ လစ်က စိတ်ပညာဗေဒကို တကယ်လေးလေးနက်နက် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ငရဲခန်း လို့ခေါ်တဲ့ ဓတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ကတည်းက သူက စိတ်ပါပါတယ်။ (ငရဲခန်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ခုမှာ အဲသည် အကြောင်းတွေ အသေးစိတ် ရေးပီးပါပီ။ ပြန်ဖတ်ကြညါ့်ပ။) စစ်အတွင်း “စိတ်ပညာ-အသံလှူငိ်းဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်း“ သုတေသနဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ထောက်ပံ့ငွေ မရတော့ဘူး။ Memorial Hall (ခန်းမတစ်ခု) က မြေအောက်ခန်းမှာ သူတို့ရဲ့ သုတေသနစာတမ်းတွေကြောင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။ အဲသည်လို နံမယ်ကောင်းရခဲ့တဲ့ ပေပါတွေထဲမှာ လစ်ရေးတဲ့ ပေပါတွေက တနှစ်ကို ၄ခုကနေ ၅ ခုလောက်ကို ရှိတယ်။ မစ်လာနဲ့အတူ ပါဝင် ရေးသားခဲ့တဲ့ အခန်း ၂ခန်းပါတဲ့ Handbook of Experimental Psychology (စိတ်ပညာဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မူ ဗေဒ လက်ကိုင်စာအုပ်) မှာ စီစစ်ပေးသူက Smity Steven စမစ်တီစတီဗင် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တစ်ဆုပ်စာ ရှိတဲ့ Memorial Hall အဖွဲ့သားတွေ ထဲမှာ လစ် မစ်လာနဲ့ မက်ဂျီ တို့ ပါတယ်။ လစ်ရဲ့၁၉၄၈ ခုနှစ် ကြိုးစားမူတွေက လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်လို့ မက်ဂျီက ပြောပါတယ်။ “သူနဲ့ စကားပြောကြည့်ရင် လ ျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ဆိုတာထက်ကို သူအလုပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်နေတာ သိသာလှပါတယ်။ သူက လ ျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအားလုံးကို သိနေပါတယ်။” လို့ မက်၈ျီက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
Von Newman ဗွန်နယူးမင်းရဲ့ ပထမအကြမ်းထည် ကွန်ပြူတာ အကြောင်း စာတမ်းကို လစ်က လူတွေ အသုံးပြုနိ်ုင်အောင် အတော်ကြီးကို ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ သူက လူ့ဥနှောက်ဆိုတဲ့အရာကို ထည့်သွင်းဖို့ နားလည်အောင် လုပ်ရတယ်။ “လစ်က နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ ပြသနာတွေကို ရှေ့က ကျွန်တော်တို့ ကိုင်တွယ်ခဲ့ကြ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြ တာကို သူက ပြန်လှန် လေ့လာခဲ့တယ်။“ ရှေ့မှာ လူတွေက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ တွေးခေါ်ထားကြတယ်။ ဒါကို သူက လက်တွေ့ကျအောင် အတော်လုပ်ရတယ်ပေါ့။
(ဒီအပိုင်းတွေမှာ လစ်ရဲ့ စာတမ်းတွေ အကြောင်း အကျယ်တဝင့် ရေးသားထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတမ်းတွေများပါတယ်။ တိရစာန်တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို လေ့လာ ဖော်ထုတ်ထားတာပါ။ အဲဒီကနေ ကွန်ပြူတာကို ဘယ်လိုသွားမလဲ ဆိုတာတော့ ကြည့်ရမှာပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ သူက လူ့ဥနှောက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပုံတွေ လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်တွေ ကို ဆက်စပ်တွေးခေါ်ပါတယ်။ ဒါတွေက တင်ပြတာတွေ သိပ်များနေလို့ ကျော်လိုက်ပါ့မယ်။)
Nobert Wiener နော်ဘတ်ဝီနာ ကတော့ အဲလို စိတ်ပညာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို သင်္ချာအမြင်နဲ့ ပုံပြောင်းမယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲသည် ခန်းမထဲမှာ လူတွေ ပေါင်းစုံပီး သူတို့ဘာသာသူတို့ ထင်တာတွေ လျောက်ပြောနေကြတဲ့အထဲမှာ အထင်ကရ ပုဂိုလ်တစ်ဦးကို ပြပါဆိုရင်Smitty Steven စတီဗင် ဖြစ်ပါတယ်။ (သူ့ကို စာရေးဆရာက စတီဗင် လို့ ခေါ်ရင်ခေါ် စမစ်တီ လို့ခေါ်ချင်ခေါ်ပါတယ်။ အဲသည် နံမယ် ၂လုံးက သူ့ကိုပဲ ပြောတာပါ။) သူက စိတ်ပညာ-အသံလှိူင်းဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သူက လစ်နဲ့မစ်လာတို့ကို ကလေးလေးတွေလို့မြင်သတဲ့။ ဘာလို့ဆို သူတို့က ဒေါသမထိန်းနိုင်သေးဘူးတဲ့။ မက်၈ျီက သူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ “သူတို့၂ယောက်စလုံးကု ိကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကလည်း သူတို့၂ဦးကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ညဏ်ပညာအရှိဆုံးသူတွေလို့ မြင်ကြပါတယ်။ စမစ်ရဲ့ မျက်စိထဲတော့ တကယ်အရေးပါတဲ့ ဟာတွေကိုပဲလုပ်စေချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းဖိုက်နေကြတာ။ အညင်းအခုန်လုပ်နေကြတာ။ သူ (စမစ် ) ပြောတာ ကျွန်တော်အခု ကြားယောင်နေသေးတယ် ဘာတဲ့ - ဂျော့မစ်လာ ဆိုတဲ့သူက စကားနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေတာ။ ခင်ဗျား အဲဒါကို ယုံသလား ဒီလူက အပြောကြီးပဲ အပြောပဲ - “
မစ်လာ ကအလည်းမခေပါဘူး။ သူက စာကို တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ သူက အခုလို သူ့ အတွေ့အကြုံတွေ အခုလို ပြောဖူးတယ်။ “ကျွန်တော်က စစ်ကြီးအပြီးမှာ မက်စက်ချူးဆက် စက်မူတက္ကသိုလ် က ဝီနာရဲ့ သတန်းတွေ လိုက်တက်တာပဲ။ အဲသည်ထဲမှာ တိုင်းစီးရီး Time-series ဆိုတာပါတယ်။ အဓိပယ်ကတော့ စစ်လေယာဉ်ပျံ တွေ ပစ်ခတ်မူကို ထိမ်းချူပ်သော ပြသနာများကို ဖြေရှင်းခြင်း ဆိုပါတော့။ အဲဒါ ဝီနာ့ဖေ့ဖရိတ် ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ရသလောက် မှတ်တာပဲ။ အဲ...ကျွန်တော့်လို စိတ်ပါလက်ပါ လိုက်လုပ်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့နား ထိုင်ပီး လက်ချာလိုက်နေသူပေါ့။ Jerry Wiesner ဂျယ်ရီ ဝီစ်နာတဲ့။ “
Memorial Hall မှာရောက်နေတဲ့လူတွေက အဲသလို စာဂျပိုးတွေ ကြီးပါ။ စိတ်တူကိုယ်တူတွေ ဆိုပေမယ့် အညင်းအခုန်ကတော့ သန်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုများ ရှေ့ဆက်ခရီးဆက်ကြမလဲ။
ဂျူနီယာဝင်း - ကွန်ပြူတာနည်းပညာတော်လှန်ရေးသို့ ခြေလှမ်းများ ၁၃ Reviewed by MoeMaKa on 4:30 AM Rating: 5